Ihlathi Apex kugula 🥇 Ukukopela, iAimbot, i-ESP, iWallhack- iGamepron
ihlathi Apex kugula
Ihlathi le-Apex yeHlathi yenye yeendlela zokukopela ezimangalisayo ezivela kuthi apha kwi-GamePron eneChams kunye ne-ESP kuphela, engafumanekiyo ukusukela kunyaka omnye. Vula ubuchule bakho bokudlala bokwenyani!
Ngaba ujonge ukuvavanya amanzi? Zama i-Apex Legends Forest Hack kunye ne-1-Day Key!
Yiba nexesha elingcono nangamaNqaku e-Apex ngokufumana isitshixo seMveliso yeVeki e-1
Nokuba uyalibala okanye ufuna ukufikelela ngakumbi, sikwabonelela ngeeNdawo zeMveliso zeNyanga e-1
Ezona zixhobo zibalaseleyo ziya kukunceda uphumelele phantse wonke umdlalo, kwaye kuphela kwento esiyibonayo kwi GamePron. Ukuba ujonga indlela yokufumana umda omkhulu kukhuphiswano kwiiNqaku ze-Apex, uyifumene!
Apex Legends Amahlathi Ulwazi lomnqweno yimfumba
Sebenzisa i-Apex Legends yeHlathi yokuHamba yimpefumlo yomoya ococekileyo kwiimeko ezininzi, njengoko imigewu emininzi isetyenziselwa ukusebenzisa iinketho zentsilelo kulo mdlalo. I-Apex Legends ngumdlalo othandwa kakhulu, kodwa bambalwa kakhulu abaphuhlisi ngaphandle apho abazimisele ukuthatha ixesha labo kunye nokuphuhlisa isixhobo esikumgangatho ophezulu. Lelona candelo lililo malunga neGamepron, njengoko singenangxaki ngokubonelela abasebenzisi bethu ngezixhobo ze-top-notch- awusoze uphoxeke xa ukhetha ukuthenga ii-Apex Legends Hacks zethu apha eGamepron. Ungavumeli abo babile bafike kuwe!
Windows 7 kunye no-10
Ungathembela kwi-Apex Legends Forest Hack yethu yokuhambisa malunga neVisual (Enemy ESP, Chams) yeempawu! Uya kuba 100% ukhuselekile usebenzisa ezi mpawu!
Ayifumaneki ngobu buqhetseba
Malunga ne-Apex Legends Forest
I-Apex Legends ngumdlalo onzima xa kufikwa kwinqanaba lakho lesakhono, njengoko uninzi lwabadlali abanamava bezokuphumelela (ubukhulu becala). Ungakutshintsha oko ngokupheleleyo ngokumilisela i-Apex Legends Forest Hack kwi-routine yakho. Nokuba kuyimpumelelo yemipu okanye ukuseta ama-ambushes, ungasebenzisa i-Apex Legends Cheat ukufezekisa nantoni na. Ngelixa bonke abanye abadlali kwigumbi lakho lokungenela beza kube bexakekile malunga nokuzama ukuqokelela ukuphanga, uya kuthi uzolile ujonge indawo yedabi kwaye wenze owona mdlali ubalaseleyo unokwenzeka! Nokuba udlala iiSolos okanye iiQela, ukusebenzisa i-Apex Legends Cheat kunyanzelekile.
Kutheni usebenzisa i-Apex Legends Forest ngaphezulu kwabanye ababoneleli?
Uya kubeka emngciphekweni ukuba ukhetha ukusebenzisa umboneleli wokungabinamali. Xa ungazithengi izixhobo zakho kumthombo onokuthenjwa, zininzi iingxaki ezinokuvela. Nokuba kunokwenzeka ukukhuphela umxholo okhohlakeleyo okanye i-Apex Legends cheats ngaphandle kokukhusela ukukopela, ukusebenzisa i-Apex Legends Forest Hack ikuvumela ukuba uyiphephe yonke loo nto. Njengokuba oko kwakungonelanga, sikwanendlela yokusebenza ngakumbi kunayo nayiphi na enye incwadi ye-Apex Legends Hack kwiwebhu!
Yenza umgudu wokuthenga into enokuthenjwa kumthombo okwinqanaba eliphezulu (njengeGamepron!) Kwaye uya kuvuzwa ngeendlela ezininzi kunenye.
Ngale Apex Legends Cheat akukho menyu ingame, njengoko ilula kakhulu akukho mfuneko yemenyu. Ikwayisibonelelo njengekhowudi encinci kunye nezinto eziphakathi kokuqhekeka kuthetha ukuba kukhuselekile. Le mveliso ayikaze ibhaqwe kwaye ibekhona kwi-Intanethi okoko kukhutshwe i-Apex. Ke musa ukulinda, ukuba ufuna i-Apex hack eyisiseko enamandla. Le mveliso yeyakho!
Umbuzo 3. Ngaba iza neHwid Spoofer?
A3. Hayi, obu buqhetseba abubandakanyi i-hwid spoofer. Sinikezela nge-hwid spoofer eyahlukileyo ye-Apex.
Abanye abantu baya kuyithanda i-Apex Legends Aimbot, ngelixa abanye bengabalandeli abakhulu beWallhack. Nantoni na ogqiba ukuyonwabela kakhulu, ukuthenga imveliso ephambili kuya kukuvumela ukuba uyisebenzise kangangoko ufuna.
Yiba ngumdlali obalaseleyo we-Apex Legends namhlanje!
Ilindelwe Lawula kunye Apex yethu Forest kugula?